Bitcoin (BTC) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda in 2019
Sicirada sarrifka lacagaha oo casriyey 19/01/2020 09:03
Bitcoin In US dollar shaxanka in 2019. Bitcoin qiimaha taariikhda in US dollar in 2019.
Bitcoin In US dollar taariikhda qiimaha, shaxanka waayo, 2019
Taariikhda sarrifka ee taariikh kasta iyo sannad kasta waad nala heli kartaa. Taariikhda sicirka isdhaafsiga internetka ee sanad walbo waa halkan. Bitcoin taariikhda taariikh kasta ha noqotee. Taariikhda Bitcoin to US dollar sicirka sarrifka laga bilaabo 2014 ilaa 2020 ayaa laga heli karaa boggan. Taariikhda Bitcoin to US dollar sicirka sarrifka laga bilaabo 2014 ilaa 2020 sanad walba.
Bitcoin US dollar qiimaha taariikhda
Garaafka taariikhda Bitcoin to US dollar laga soo bilaabo 2014 iyadoo la soo xiganayo sanad kasta. Taariikhda sarrifka garaafka garaafka dhammaan waxyaabaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta' muddo 5 sano ah websaydhka 'cryptoratesxe.com' Sawirka taariikhda oraahda Bitcoin ilaa US dollar ilaa 2014 khadka tooska ah oo bilaash ah. Waxaad ogaan kartaa sida saxda ah Qiimaha Bitcoin qiimaha shaxda haddii aad kor u dhaaftay taariikhda la xushay. Si aad u ogaato heerka saxda ah ee sanadkii la soo dhaafay, ku kor maro garaafka taariikhda Bitcoin to US dollar.
January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014
December 2019 From 6 664 In 7 579 USD
November 2019 From 6 841 In 9 444 USD
October 2019 From 7 488 In 9 931 USD
September 2019 From 8 028 In 10 580 USD
August 2019 From 9 461 In 11 890 USD
July 2019 From 9 487 In 12 859 USD
June 2019 From 7 660 In 12 732 USD
May 2019 From 5 379 In 8 780 USD
April 2019 From 4 107 In 5 575 USD
March 2019 From 3 756 In 4 107 USD
February 2019 From 3 403 In 4 003 USD
January 2019 From 3 486 In 4 077 USD
Waxaad ka arki kartaa jadwalka taariikhda Bitcoin sarrifka lacagaha laga soo bilaabo 2014 bogga websaydhka. Kuwani Bitcoin ilaa US dollar sicirka isdhaafsiga miiska sannad walba waa bilaash halkan. Taariikhda sicirka sarrifka shaxda: Bitcoin to US dollar) ayaa la heli karaa sannad kasta: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Xigashooyinka billaha ah Bitcoin to US dollar, waad arki kartaa haddii aad gujiso isku xirka sanadka ee jadwalka taariikhda sanadka. Waad arki kartaa Bitcoin si US dollar sicirka sarrifka sanad kasta iyo bil kasta. Guji xiriiriyaha sanadka.
Qiyaas inta lacagta digital ay isu badashay sanad, 2 sano ama 5 sano. Eeg jaantuska xigashooyinka waqti dheer. Kordhinta iyo hoos udhaca Bitcoin / US dollar sicirka sarrifka sanadkasta ee: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Dhaqdhaqaaqa muddada-dheer ee Bitcoin to US dollar toban sano ka badan ayay suurtagal tahay in lagu qiyaaso boggan. Boggeena internetka waxaa ku yaal taariikh ah qiimayaasha dhammaan lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta' marka loo eego dhammaan.
Dooro lacagta digital halkii a Bitcoin si aad u ogaato taariikhda sarrifka ay US dollar. Taariikh bilaash ah ee xigashooyinka dhammaan aaladaha lacagta 5-tii sano ee la soo dhaafay qeybtan websaydhka 'cryptoratesxe.com' Bitcoin to US dollar sicirka isbadalada laga bilaabo 2014 ilaa 2020 ayaa halkan lagu muujiyey. Guji sanadka shaxda si aad u ogaato taariikhda Bitcoin ilaa US dollar.